अबिलिफा बनाम रेक्सल्टी: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ - औषधि बनाम मित्र | सेप्टेम्बर 2021
घरपालुवा जनावर समुदाय, कम्पनी चेकआउट औषधि जानकारी प्रेस स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार समुदाय कम्पनी, समाचार मनोरञ्जन समाचार कम्पनी, औषधि जानकारी औषधि बनाम मित्र भारी खेल कम्पनी स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> अबिलिफा बनाम रेक्सल्टी: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ
एबिलीफाई (एरिपिप्राजोल) र रेक्सुल्टी (ब्रेक्सपिज्राजोल) दुबै एटिकल एन्टिसाइकोटिक्स हो। दुबै औषधिहरू संयुक्त राज्य खाद्य र औषधि प्रशासन (एफडीए) द्वारा अनुमोदित छ। अबिलिफाई यसको सामान्य फ्रिमा एरिपिप्रजोलमा पनि उपलब्ध छ। वर्तमानमा जेनेरिक फार्ममा उपलब्ध छैन।
एटिपिकल एन्टिसाइकोटिक ड्रग्स दोस्रो पुस्ताको एन्टिसाइकोटिक्स पनि भनिन्छ। हेलोपेरिडोल जस्ता पहिलो पुस्ताको एन्टिसाइकोटिक्स १ 50 .० को दशकमा विकसित भयो। यी औषधीहरूका धेरै साइड इफेक्टहरू थिए, जस्तै एक्स्ट्रापाइरामीडल लक्षणहरू। एक्स्ट्रापिरिमाइडल लक्षण डोपामाइनको नाकाबन्दीले गर्दा हुन्छ। यी लक्षणहरूमा अनियन्त्रित र अनैच्छिक मांसपेशीहरूको आन्दोलन, चुपचाप बस्न असमर्थता, काम्चा, र अनैच्छिक आँखा झिम्कने जस्ता आन्दोलन डिसअर्डरहरू समावेश छन्।
अबिलिफाई र रेक्सल्टी जस्ता दोस्रो-पुस्ताको एन्टिसाइकोटिकहरू नयाँ छन् र कम एक्स्ट्रामिराइडल साइड इफेक्टहरू छन्। किनभने तिनीहरू उत्तम सहन गरिन्छ, तिनीहरू पहिलो पुस्ताको एन्टिसाइकोटिक्स भन्दा रुचाइएको उपचार हो।
एटिबिकल एन्टिसाइकोटिक्स, एबिलीफाई र रेक्सल्टी जस्ता कसरी काम गर्छ? कार्यको सही संयन्त्र ज्ञात छैन। तिनीहरू D2 डोपामाइन रिसेप्टर्स र सेरोटोनिन- 5-HT1A र मस्तिष्कमा 5-HT2A रिसेप्टर्समा काम गर्ने सोचेका छन्, स्किजोफ्रेनिया वा अन्य विकारहरूको लक्षणहरूलाई मद्दत गर्ने। रक्सुल्टी रासायनिक र संरचनात्मक रूपमा Abilify समान छ, जो तिनीहरूलाई समान बनाउँछ, तर वास्तवमा उस्तै छैन। अबिलिफाई र पुनःसुल्टीको बारेमा सबै जान्नको लागि पढ्न जारी राख्नुहोस्।
एबिलीफाई र रेक्सल्टी बीचको मुख्य भिन्नता के हो?
एबिलीफाई र रेक्सुल्टी दुबै एटिकल एन्टीसाइकोटिक औषधि हो। एबिलीफाई (एरिपिप्रजोल) ब्रान्ड र जेनेरिक फार्ममा उपलब्ध छ, र रेक्सल्टी (ब्रेक्सपिप्राजोल) हाल ब्रान्ड नाममा मात्र उपलब्ध छन्। दुबै औषधि ट्याब्लेटको रूपमा उपलब्ध छन्। Abilify अन्य खुराक फारमहरूमा पनि उपलब्ध छ (विवरणहरूको लागि तल चार्ट हेर्नुहोस्)।
अबिलिफाई र रेक्सल्टी बीचको मुख्य भिन्नता
औषधि वर्ग एटिपिकल एन्टिसाइकोटिक एटिपिकल एन्टिसाइकोटिक
जेनेरिक नाम के हो? Aripiprazole ब्रेक्सिप्राजेजोल
कुन फार्म (हरू) ड्रग भित्र आउँछ? ट्याब्लेट, ट्याब्लेट विच्छेदन, मौखिक समाधान, इंजेक्शन, लामो-अभिनय इंजेक्शन (डिपो) ट्याब्लेट
मानक खुराक के हो? फरक: धेरै वयस्क बिरामीहरूले दिनको mouth देखि १ mg मिग्रि मुखबाट लिन्छन् फरक: धेरै वयस्क बिरामीहरू दिनदिन १ देखि mg मिग्रि मुखले लिन्छन्
विशिष्ट उपचार कति लामो हुन्छ? फरक: बिरामीहरूलाई आवधिक रूपमा पुन: परीक्षण गर्नुपर्छ फरक: बिरामीहरूलाई आवधिक रूपमा पुन: परीक्षण गर्नुपर्छ
कसले औषधी प्रयोग गर्दछ? वयस्क र बच्चाहरू (उमेर जसमा Abilify प्रयोग गर्न सकिन्छ शर्तमा निर्भर गर्दछ) वयस्कहरू
Abilify मा सबै भन्दा राम्रो मूल्य चाहनुहुन्छ?
अबिलिफाई मूल्य सचेतका लागि साइन अप गर्नुहोस् र जब मूल्य परिवर्तन हुन्छ फेला पार्नुहोस्!
अबिलिफाई र रेक्सल्टी द्वारा उपचारित सर्तहरू
एबिलीफाई र रेक्सुल्टी दुबै सिजोफ्रेनियाको उपचारका लागि संकेत गरिएका छन्। तिनीहरू दुबै प्रमुख डिप्रेसिव डिसअर्डर (MDD) को उपचारका लागि सहायक औषधि (antidepressant औषधिको साथ) को रूपमा अनुमोदित छन्।
थप रूपमा, एबिलीफाइले द्विध्रुवी I अव्यवस्थाको उपचार गर्न सक्दछ (manic र मिश्रित एपिसोडको गहन उपचार वा मर्मत सम्भार उपचार), Tourette को अराजकता, र अटिस्टिक डिसअर्डरको कारण चिड़चिड़ापन। अबिलिफाइको इन्जेक्शन फारम स्किजोफ्रेनिया वा द्विध्रुवी विकारको कारण आन्दोलनको गहन उपचारको लागि प्रयोग गरिन्छ।
सर्त Abilify रेक्सल्टी
स्किजोफ्रेनिया को उपचार हो हो
द्विध्रुवी I विकार (तीव्र र रखरखाव उपचार) हो हैन
डिप्रेसनका लागि एन्टीडिप्रेससन्टहरूमा एडजेन्क्टिभ थेरापी हो हो
चिडचिडेपन अटिस्टिक डिसअर्डरको साथ सम्बन्धित छ हो हैन
Tourette को अराजक को उपचार हो हैन
स्किजोफ्रेनिया वा द्विध्रुवी विकारको कारण आन्दोलनको गहन उपचार हो (इंजेक्शन फारम) हैन
के अबिलिफाई वा रेक्सल्टी अधिक प्रभावी छ?
अबिलीफाइ र सीधा सीधा तुलना गर्ने त्यहाँ एकदम थोरै डेटा छ।
एक लेख साइकोफार्माकोलोजीमा चिकित्सीय अग्रिमतामा डाटालाई हेराई र समीक्षा गरिएको अध्ययनहरू (एक मेटा-विश्लेषण)। अन्वेषकहरूले निष्कर्ष निकाले कि रेक्सुल्टीले अकेथिसिया (आन्दोलन गडबडी), अनिद्रा, बेचैनी, मतली, तौल, र बेहोराको कम साइड इफेक्टको कारण विशेष रिसेप्टर्समा यसको गतिविधि गरेको हो।
आबिलीफाइको आन्दोलन सम्बन्धित साइड इफेक्टहरू, यद्यपि, हल्का र प्रस्ट्राइबरले कम खुराकको प्रबन्धन गरेर व्यवस्थापन गरेको देखिन्छ। ब्रान्ड-नाम रेक्सलुटीको उच्च लागत पनि धेरै बिरामीहरूको लागि कारक हुन सक्छ, जेनेरिक एबिलीफाइको कम मूल्यको तुलनामा।
सानाे अध्ययन अबीलीफाई र रेक्सुल्टीलाई तीव्र स्किजोफ्रेनिया (अस्पतालको सेटिंगमा) भएका बिरामीहरूमा तुलना गरे र दुबै औषधी समान प्रभावकारी पाए। रेक्सुल्टी लिने बिरामीहरूले कम अनुभव गरे एक्स्ट्रामाइराइडल साइड इफेक्ट। यो सीमितता याद गर्नु महत्त्वपूर्ण छ कि यो अध्ययन खुला लेबल अध्ययन थियो (जहाँ दुबै अन्वेषकहरू र बिरामीहरूलाई थाहा थियो कि बिरामीले कुन औषधि लिइरहेको छ)। एक खुला लेबल अध्ययन उच्च-गुणवत्ता डबल ब्लाइन्ड अध्ययन को रूप मा छैन जहाँ कुनै पूर्वाग्रह छैन।
एक अध्ययन अबिलिफाई र रेक्सल्टीबाट तौल बृद्धि हुने साइड इफेक्टमा हेरे अध्ययनले निष्कर्ष निकाल्यो कि दुबै औषधीहरूले एक बर्ष पछि शरीरको वजन (लगभग -10-१० एलबीएसको बृद्धि) मा समान प्रभाव पारेको छ।
सब भन्दा प्रभावकारी औषधी एक हो जुन तपाईको लागि राम्रो काम गर्दछ र कमसेकम (वा सब भन्दा सहन योग्य) साइड इफेक्ट हुन्छ। तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले तपाईलाई Abilify वा Rexults तपाईको लागि राम्रो छ कि छैन भन्ने निर्णय गर्न मद्दत गर्न सक्छ, तपाईको चिकित्सा अवस्था र ईतिहासको साथसाथै तपाईले लिनुहुने अन्य औषधीहरू जसमा Abilify वा Rexult सँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्छ।
रेक्सल्टीमा सब भन्दा राम्रो मूल्य चाहनुहुन्छ?
Rexult मूल्य अलर्ट को लागी साइन अप गर्नुहोस् र जब मूल्य परिवर्तन हुन्छ फेला पार्नुहोस्!
कभरेज र लागत तुलना Abilify विरुद्ध
Abilify सामान्यतया बीमा योजना, मेडिकेयर भाग डी, र चिकित्सा सल्लाह योजनाहरु द्वारा कभर गरिएको छ। जेनेरिक mg मिलीग्राम ट्याब्लेटको सामान्य एक महिनाको आपूर्ति को लागी खर्चको about 700 को लागी हुनेछ। एक सिंगलकेयर कार्डले मूल्यलाई लगभग $ to down मा तल ल्याउन सक्छ।
अधिकतम, तर सबै होइन, बीमा योजनाहरू, मेडिकेयर पार्ट डी, र मेडिकेयर एडवांटेज योजनाहरू द्वारा रेक्सल्टी कभर गरिएको छ। यदि तपाईंले जेबबाट भुक्तान गर्नुभयो भने, २ महिनाको ट्याब्लेटको एक महिनाको आपूर्तिको लागि $ २0० लाग्नेछ। एकलकेयर कूपन प्रयोग गर्नाले about १ to the सम्ममा मूल्य ल्याउनेछ।
सामान्यतया बीमा द्वारा कभर? हो हो (सामान्यतया)
मानक खुराक ,०, mg मिलीग्राम ट्याब्लेटहरू ,०, २ मिलीग्राम ट्याब्लेटहरू
विशिष्ट मेडिकेयर कोपे $ १- $। $ १०- $ १
एकलकेयर लागत $ + + $ 198 +
अबिलिफा बनाम रेक्सल्टीको साझा साइड इफेक्टहरू
वयस्कहरूमा एबिलीफाइको सबैभन्दा सामान्य साइड इफेक्टहरू मतली, बान्ता, कब्ज, टाउको दुख्ने, चक्कर, चिन्ता, अनिद्रा, अकाथिसिया (एन्टिसाइकोटिक औषधिको कारण एक आन्दोलनको विकार), र आन्दोलन हो। अन्य साइड इफेक्टमा अपच, सुख्खा मुख, दाँत दुख्ने, पेट असुविधा, थकान, कठोरता, बेहोरापन, कम्पन, र खोकी समावेश छ।
निर्धारित जानकारीमा सूचीबद्ध रेक्सटुल्टीको सबैभन्दा सामान्य साइड इफेक्टहरू भनेको टाउको दुख्ने, चक्कर आउने, चिन्ता, अकाथिसिया, तौल, थकान, र आन्दोलन / बेचैनी हो।
यो सूची साइड इफेक्टको पूर्ण सूची होइन — अन्य साइड इफेक्टहरू हुन सक्छ। Abilify र Rexult को प्रतिकूल प्रभावहरूको पूर्ण सूचीको लागि तपाईको स्वास्थ्यसेवा पेशेवरसँग परामर्श लिनुहोस्।
मतली हो पन्ध्र% हो ≥1%
बान्ता हो एघार% हैन -
कब्ज हो एघार% हो दुई%
टाउको दुखाई हो २%% हो %%
चक्कर हो १०% हो %%
चिन्ता हो १%% हो %%
अनिद्रा हो १%% हो ≥1%
अकाथिसिया हो १%% हो %%
आन्दोलन / बेचैनी हो १%% हो %%
थकान हो %% हो %%
तौल हो दुई% हो %%
स्रोत: डेलीमेड ( Abilify ), डेलीमेड ( रेक्सल्टी )
अबिलिफा बनाम रक्सल्टीको ड्रग अन्तरक्रिया
अबिलिफाई र रक्सील्टलाई रक्सी वा औषधीहरूको साथ नलगाउनुहोस् जसले केन्द्रीय स्नायु प्रणाली (सीएनएस) डिप्रेसन निम्त्याउँछ। थप असरहरू देखा पर्न सक्छ, जस्तै अत्यधिक चक्कर आना, तन्द्रा, र साइकोमोटर कमजोरी, घातक दुर्घटनाहरूको लागि अग्रणी। अन्य औषधीको अन्तर्क्रियामा हाइपोभेन्टेलेसन (जो जीवन-खतरा हुन सक्छ), रक्तचापमा कमी, वा एक्स्ट्रापाइरामिडाल लक्षणहरू (ड्रग-प्रेरित आन्दोलन विकारहरू, काँप, कठोरता, र ढिलो गतिशीलताले निम्त्याएको) हुन सक्छ।
अबिलिफाई वा रेक्सुल्टी, रक्तचाप औषधीको साथ संयोजनमा, रक्तचाप कम हुन सक्छ। यदि तपाईलाई उच्च रक्तचाप छ वा तपाईको रक्तचापको लागि औषधि लिनुभयो भने तपाईको प्रिस्क्रिबरसँग परामर्श लिनुहोस्।
Abilify र Rexult दुबै विशिष्ट ईन्जाइमहरू द्वारा metabolized ड्रग्सको साथ अन्तर्क्रिया गर्दछ। एन्जाइमहरूलाई रोक्ने औषधीहरूले अबिलिफाई वा रेक्सल्टीको स्तर बढाउन सक्दछ। ड्रग्स जसले एन्जाइम प्रेरित गर्छ अबिलिफाई वा रेक्सल्टीको स्तर कम गर्न सक्छ। यदि अन्तर्क्रियात्मक औषधि संयोजनलाई रोक्न सकिएन भने, प्रिस्क्राइडरले डोजिंग समायोजित गर्नुपर्नेछ।
अन्य औषधि अन्तर्क्रिया हुन सक्छ। औषधि अन्तर्क्रियाको पूर्ण सूचीको लागि तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस् तपाईंले Abilify वा Rexult लिनु अघि।
औषधि ड्रग क्लास Abilify संग अन्तरक्रिया? रेक्सल्टीसँग अन्तर्क्रिया?
रक्तचाप औषधी Antihypertensives हो हो
Ziprasidone एन्टिसाइकोटिक्स हो हो
भेन्लाफैक्सिन Antidepressants हो हो
केटोकोनाजोल एंजाइम CYP3A4 का अवरोधहरू हो हो
क्विनिडाइन एंजाइम CYP2D6 का अवरोधहरू हो हो
सेन्ट जोन वर्ट एन्जाइम CYP3A4 का अनुक्रमणिका हो हो
अबिलिफाई र पुनःसुल्टीको चेतावनी
किनभने अबिलीफाई र रक्सल्टी एक समान हो, उनीहरूसँग समान चेतावनी छ:
त्यहाँ कालो बक्स चेतावनी छ, जुन एफडीएलाई आवश्यक पर्ने सबैभन्दा कडा चेतावनी हो।
एबिलीफाई र रेक्सुल्टी डिमेन्शिया-सम्बन्धित साइकोसिसको साथ वृद्ध बिरामीहरूको उपचार गर्न अनुमोदित छैन। यी बिरामीहरू मृत्युको बढ्दो जोखिममा छन्। एन्टिप्रेसप्रेसन्ट औषधिहरूले २ 24 बर्ष र अधिक उमेरका बिरामीहरूमा आत्महत्या विचार र व्यवहारको जोखिम बढाउँछन्। सबै उमेरका बिरामीहरूलाई राम्ररी निगरानी गर्नुहोस् जसले डिप्रेसनको बिमार, व्यवहारमा परिवर्तन, र आत्मघाती विचारहरू / व्यवहारहरूको लागि एन्टिडिप्रेसन्ट्स लिन्छन्।
अबिलिफाई र रक्सल्टीको अन्य चेतावनी समावेश:
डिमेन्शिया-सम्बन्धित मनोविकृति भएका वृद्ध बिरामीहरूमा सेरेब्र्रोभास्कुलर घटनाहरू जस्तै स्ट्रोक वा ट्रान्जियन्ट इस्केमिक अटैकको घटना बढेको छ।
यदि बिरामी विकास हुन्छ न्यूरोलेप्टिक घातक सिंड्रोम (सम्भावित घातक), तुरुन्त Abilify वा Rexults रोक्नुहोस् र बिरामीलाई निगरानी गर्नुहोस्। न्यूरोलेप्टिक घातक सिंड्रोमको लक्षण र लक्षणहरूमा ज्वरो, परिवर्तित मानसिक स्थिति, कठोरता, र मुटुको दर वा रक्तचाप परिवर्तनहरू समावेश छन्।
यदि बिरामीले टर्डिभ डिस्किनेसिया विकास गर्दछ (अनैच्छिक, दोहोरिने आन्दोलनहरू जस्तै ग्रिमेसिंग वा आँखा झिम्कने), Abilify बन्द गर्नुहोस् वा उपयुक्त भएमा रेक्सल्टी।
एटिपिकल एन्टिसाइकोटिक्सले मेटाबोलिक परिवर्तनहरू गर्न सक्दछ, रगतमा चिनी / मधुमेह, कोलेस्ट्रोल वृद्धि भएको, र तौल वृद्धिसहित। यी परिवर्तनहरूका लागि बिरामीहरूलाई निरीक्षण गर्नुहोस्।
अबिलिफाई वा रेक्सल्टीले रोगजनक जुवा र अन्य बाध्यकारी ब्यवहार (शपिंगको लागि आग्रह गर्दछ, द्वि घातुमान खानु, र यौन संबंध राख्न सक्छ)। यी आचरणहरूलाई कम खुराक वा औषधिको विच्छेदन आवश्यक पर्दछ।
मुटुको दर र रक्तचाप मोनिटर गर्नुहोस्। ओर्थोस्टेटिक हाइपोटेशन (कम रक्तचाप जब तपाईं खडा हुन्छ) वा बेहोशी हुन सक्छ।
चोटपटक र फ्र्याक्चरको कारण फल्स हुन सक्छ। स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले एक गिरावट जोखिम मूल्या complete्कन पूरा गर्नु पर्छ जब औषधी सुरू गर्दछ र बारम्बार।
Esophageal समस्या र आकांक्षा हुन सक्छ। आकांक्षाका लागि जोखिममा बिरामीहरूमा सावधानीका साथ प्रयोग गर्नुहोस्।
सेतो रक्त कोष गणनामा परिवर्तन हुन सक्छ। कम रगत कोशिका गणनाको इतिहासको साथ बिरामीहरूको लागि शुरुका केही महिनाहरूमा पूर्ण रक्त गणना बारम्बार अनुगमन गरिनु पर्छ।
एब्लिफाई वा रेक्सुल्ती सावधानीपूर्वक प्रयोग गर्ने बिरामीहरूमा दौरामा पर्ने ईतिहासको साथ।
गाडी चलाउँदा वा अपरेटि machinery म्यानिरी when्मा सावधानी अपनाउनुहोस् जबसम्म तपाईंलाई थाहा हुँदैन कि अबिलिफाइ वा रेक्सुल्टीले तपाईंलाई कसरी असर गर्छ।
त्यहाँ स्किजोफ्रेनिया र द्विध्रुवीय गडबडी भएका बिरामीहरूमा आत्महत्याको जोखिम बढेको छ। यी बिरामीहरूलाई नजिकबाट निरीक्षण गर्नुहोस्।
ड्रग अन्तर्क्रियाको सम्भावनाको कारणले तपाईले लिनुहुने कुनै पनि अन्य औषधीहरूको प्रिस्क्रिटरलाई सूचित गर्नुहोस्, दुबै प्रिस्क्रिप्शन र अति-काउन्टर।
अत्यधिक ताप र डिहाइड्रसनबाट बच्नुहोस्।
तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई सूचीत गर्नुहोस् यदि तपाईं गर्भवती हुनुभयो भने Abilify वा Rexult लिने बेलामा। यी ड्रग्सहरूले नवजातमा एक्स्ट्रापिरिमाइडल वा फिर्ती लक्षणहरू निम्त्याउन सक्छ।
अबिलिफा बनाम रेक्सल्टीको बारेमा प्राय: सोधिने प्रश्नहरू
अबिलिफाइ भनेको के हो?
Abilify (aripiprazole) एक atypical antipsychotic, ब्रान्ड र जेनेरिकमा उपलब्ध छ। अबिलीफाइ स्किजोफ्रेनिया, डिप्रेसन (एन्टिडेप्रेसन्ट ड्रगको साथ), द्विध्रुवी आई डिसअर्डर, टोर्रेट डिसअर्डर, अटिष्टिक डिसअर्डरको कारण चिडचिडपन, र स्किजोफ्रेनिया वा द्विध्रुवीय डिसअर्डरको कारण आन्दोलनको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ।
रक्सल्टि भनेको के हो?
रेक्सुल्टी (ब्रेक्सपिज्राजोल) एक atypical antipsychotic, ब्रान्ड नाम मा उपलब्ध छ। यो डिप्रेसनको उपचार गर्नका लागि प्रयोग गरिन्छ (एन्टिडेप्रेसन्ट औषधिको संयोजनमा) र स्किजोफ्रेनिया।
तपाइँ कसरी एक कान संक्रमण बाट छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ
के अबिलिफाई र रेक्सल्टी एकै हो?
दुबै औषधि रासायनिक रूपमा समान छन् र दोस्रो पुस्ता, एटिपिकल एन्टिसाइकोटिक्स हो। उनीहरूसँग केहि समानताहरू र केहि मतभिन्नताहरू छन्, जुन माथिको जानकारीमा रेखांकित गरिएका छन्।
के अबिलिफाई वा रेक्सल्टी राम्रो छ?
त्यहाँ दुई औषधिहरू तुलना गर्न थोरै डाटा छ। एफडीए अनुमोदित हुनका लागि दुबै औषधिहरूले प्रभावकारिता र सुरक्षाका लागि क्लिनिकल परीक्षणहरू गरेका छन्। तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले निर्णय गर्न सक्छन् यदि Abilify वा Rexુટ तपाईंको लागि राम्रो छ तपाईंको चिकित्सा अवस्था, ईतिहास, र अन्य औषधिहरू जुन तपाईं Abilify वा Rexult सँग अन्तर्क्रिया लिन सक्नुहुनेछ।
के म गर्भवती हुँदा अबिलिफाई वा रेक्सल्टि प्रयोग गर्न सक्छु?
गर्भावस्थाको तेस्रो त्रैमासिकको बखत एटपिकल एन्टिसाइकोटिक्समा पर्दा नियोनेट्स एक्स्ट्रापाइरामिडल लक्षणहरूको लागि बढि जोखिममा हुन्छन् (केहि विस्तारित अस्पताल भर्तीको आवश्यक पर्दछ) र प्रसूति पछि लक्षण फिर्ता लिने।
गर्भावस्थामा औषधीहरू प्रयोग गर्दा जोखिमहरू हुन्छन्, र मानसिक स्वास्थ्य अवस्थाको पनि उपचार नगर्ने जोखिमहरू छन्। चिकित्सा सल्लाहका लागि तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्। यदि तपाईं पहिले नै Abilify वा Rexult लिइरहनु भएको छ र तपाईं गर्भवती हुनुहुन्छ भन्ने फेला पार्नुभयो भने, तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
मनोचिकित्सा औषधीहरूको लागि राष्ट्रिय गर्भधारण रेजिस्ट्री गर्भावस्था नतिजा निगरानी गर्दछ बिरामीहरुमा जो गर्भवती हुँदा साइकियट्रिक औषधि लिन्छन्।
म Abilify वा रक्सीको साथ मद्दत गर्न सक्छु?
होइन। तपाईंले Abilify वा Rexult लिनुभयो भने रक्सी पिउनु हुँदैन। संयोजनले सीएनएस डिप्रेशन (अधिक सेडेशन, साइकोमोटर कमजोरी, जसले दुर्घटनाहरू निम्त्याउन सक्छ) र श्वासप्रश्वासको उदासीनता (सास फेर्न धीमा हुन्छ वा रोक्न पनि सक्छ) र कम रक्तचापको जोखिम बढाउन सक्छ।
के रेक्सुल्टीले डोपामाइन बढाउँदछ?
एटिपिकल एन्टिसाइकोटिक्स जस्तै रेक्सुल्टी (र एबिलीफाइ) को आंशिक एगोनिस्ट गतिविधि D2 डोपामाइन रिसेप्टर्समा छ। आंशिक एगोनिस्टको अर्थ भनेको औषधि रिसेप्टरसँग बाँधिन्छ र यसलाई सक्रिय बनाउँछ, तर यो आंशिक रूपमा मात्र प्रभावकारी हुन्छ (पूर्ण एगोनिस्टको तुलनामा)। त्यसो भए, यी औषधीहरूले आंशिक रूपमा डोपामाइन रिसेप्टर्स सक्रिय गर्दछन्, जसले डोपामाइनको स्तर बढाउँदछ। यी औषधिहरूले सेरोटोनिन रिसेप्टर्समा पनि काम गर्दछन्।
के रेक्सुल्टी एन्टिसाइकोटिक हो?
हो रेक्सुल्टी दोस्रो पुस्ताको एन्टिसाइकोटिक हो। दोस्रो पुस्ताको एन्टिसाइकोटिक्स नयाँ हो र पहिलो पुस्ताको एन्टिसाइकोटिक भन्दा कम साइड इफेक्ट पैदा गर्दछ। एबिलीफाई र रेक्सल्टीको अलावा, अन्य दोस्रो पुस्ताको एन्टिसाइकोटिक्स समावेश:
Clozaril (Clozapine) ले अमेरिकामा वितरण प्रतिबन्धित गरेको छ यसको गम्भीर साइड इफेक्टका कारण।
के रक्सुल्टिले चिन्तालाई मद्दत गर्दछ?
रेक्सुल्टी हाल स्किजोफ्रेनिया र डिप्रेशन (एक antidepressant संग संयोजन मा) को लागी अनुमोदित छ। एउटा अध्ययन डिप्रेसन र चिन्ताका लक्षण भएका बिरामीहरूलाई हेरे र चिन्ता भएका बिरामीहरूमा अवसादग्रस्त लक्षणहरू (र राम्रोसँग सहन गरिएको थियो) लाई मद्दत गर्न रेक्सुलेट भेट्टाए। एक antidepressant एक्लै मद्दत नगर्दा बिरामीहरूले एक antidepressant संग संयोजन मा Rexult ले। यदि तपाईलाई चिन्ता छ भने आफ्नो स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संग परामर्श गर्नुहोस्। ऊ वा उनी तपाई को लागी उपयुक्त उपचार निर्धारित गर्न सक्दछन्।
Sudafed vs Mucinex: भिन्नता, समानताहरू र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ
उच्च रक्तचाप संग व्यायाम यो सुरक्षित छ
बीमा बिना फ्रीस्टाइल libre १४ दिन लागत
के म गोली को3दिन पछि बिहान लिन सक्छु
के तपाइँ धेरै सक्रिय चारकोल लिन सक्नुहुन्छ